စာရေးသူများစွာကို Google Analytics ဖြင့်ခြေရာခံပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 12, 2009 တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 24, 2016 Douglas Karr
စာရေးသူတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်စာရေးသူတစ် ဦး စီသည်အမျိုးအစားများစွာဖြင့်တင်နိုင်သည်။ တစ်ခုစီသည်ရေးသားသူတစ် ဦး ချင်း၏ထည့် ၀ င်မှုများကိုထို site ၏မဟာဗျူဟာတွင်ဖော်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါမကြာသေးမီကဤနှင့်အတူအချို့သောစမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာနှင့်စာရေးဆရာတစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့်အသွားအလာတိုင်းတာတဲ့ကောင်းတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Google Analytics အပိုဆောင်းကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ကို virtual စာမျက်နှာများ။ ဤသည်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကြော်ငြာများနှင့်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများသို့အရေးယူရန်ခေါ်ဆိုမှုများအပြင်ထွက်လင့်များကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်၏ Google Analytics ကုဒ်ကိုသင်၏စာမူတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာတင်ခြင်းအားဖြင့်စာရေးသူတစ် ဦး ချင်း၏လူကြိုက်များမှုကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည်။
စာမျက်နှာတစ်ခု၏ပုံမှန် GA ကုဒ်သည်ဤသို့ဖြစ်သည် -
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X"); pageTracker._initData (); pageTracker._trackPageview ();
အောက်ပါတို့ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် 'virtual' စာမျက်နှာမြင်ကွင်းကိုထည့်နိုင်သည်။
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X"); pageTracker._initData (); pageTracker._trackPageview ("/ by / စာရေးသူ /Douglas Karr"); pageTracker._trackPageview ();
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X"); pageTracker._initData (); pageTracker._trackPageview (? / စာရေးသူ / ?); pageTracker._trackPageview ();
UPDATE: မှတ်ချက်ပေးသူနှစ် ဦး ကအလုပ်မလုပ်ကြောင်းထောက်ပြသည် WordPress ကွင်းဆက် အတွင်း!
၎င်းသည်လိုအပ်သော pageview ကို Single Post စာမျက်နှာပေါ်တွင်သာတင်လိမ့်မည်။ သင်သည်မူလစာမျက်နှာရှိပထမဆုံးစာမူကိုစောင့်ကြည့်ရန်၎င်းကိုတိုးချဲ့လိုပေမည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အနည်းဆုံးအစဖြစ်သည်။ Google Analytics တွင်၊ အကြောင်းအရာအစီရင်ခံစာ ၎င်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာစစ်ထုတ်ပါ "/ စာရေးသူ /" စာရေးသူများနှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာအမြင်များ၊ နှုန်းခများ၊ စာမျက်နှာပေါ်ရှိအချိန်နှင့်စကားဝိုင်းများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်။
ယခုသင်သည်သင်၏စာရေးဆရာများကိုသင်၏အဖွဲ့အစည်းသို့သူတို့အမှန်တကယ်ထည့်ဝင်သောအလှူငွေများအတွက်စတင်ဆုချနိုင်သည်။ သင် WordPress သုံး၍ ပြissuesနာများကြုံရလျှင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ကုဒ်ကိုရေးသားပြီး၎င်းကိုမစမ်းသပ်ပါ။
Tags: analytics googleစာရေးသူအားဖြင့်စာမျက်နှာမြင်ကွင်းစာမျက်နှာအမြင်များနေပြည်တော်
Barbara Ling၊ Virtual Coach
မတ်လ 13, 2009 မှာ 5: 29 AM
အိုး၊ ကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်များတွင် စာရေးဆရာများစွာ မရှိသေးသော်လည်း ၎င်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် မှတ်သားထားမည်မှာ သေချာပါသည်။ အကြံကောင်းများ!!
မတ်လ 31, 2009 မှာ 4: 02 AM
ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် google analytics မှာ စာရေးသူက အကြောင်းအရာအစီရင်ခံစာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။ အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဧပြီ 1, 2009 မှာ 9: 08 AM
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ အကြောင်းအရာအစီရင်ခံစာကိုဖွင့်ပြီး “/author/” ဖြင့် စစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သင်သည် အစီရင်ခံစာကို သင့်ကိုယ်သင် အပတ်စဉ် အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ Google Analytics သည် အီးမေးလ်ပို့ထားသော အစီရင်ခံစာများပေါ်တွင် စစ်ထုတ်မှုများကို သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခု လုပ်ဆောင်သည် (ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာကို ထိုနည်းအတိုင်း သိမ်းဆည်းခွင့်ပြုစေလိုပါသည်။)
ဧပြီ 17, 2009 မှာ 12: 45 pm တွင်
သင့်ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အဆင်မပြေပါ။ ကျွန်ုပ်၏ WordPress Blog တွင် စာရေးဆရာ4ဦး ရှိပြီး ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ ပုံစံပလိတ်ရှိ tag မတိုင်မီတွင် ကျွန်ုပ်တင်ထားသော ကုဒ်ဖြစ်သည်
var gaJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://ssl” : “http://www”);
UA-XXXXXX-X ကို ကျွန်ုပ်၏ ID ဖြင့် အစားထိုးလိုက်ပါပြီ…. ကျွန်ုပ်၏ကုဒ်သည် မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။
ရင်းမြစ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပဲ မြင်ရတယ်။ သင်၏အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့် WordPress ပလပ်အင်ကိုမျှ မသုံးပါ။
ကူညီပါ ! ငါဒါကိုလိုအပ်တယ်..
ဧပြီ 21, 2009 မှာ 3: 06 pm တွင်
သင်၏ permalink တည်ဆောက်ပုံတွင် စာရေးသူပါဝင်မှသာ ခြေရာခံခြင်းနည်းလမ်းသည် အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ url တည်ဆောက်ပုံသည် တိကျသောစာရေးဆရာအတွက် စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများကို မည်သို့ခြေရာခံနိုင်သည်ကို မိုင်းမှမလုပ်ဆောင်ပါ။ http://www.mysite.com/month/day/posttitle?
_setVar လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန် ကုဒ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသလား။
ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုလည်ပတ်နေလဲ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ ငါက အသစ်ပါ။
ဧပြီ 21, 2009 မှာ 11: 41 pm တွင်
ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာ ငါသိတယ်လို့ ငါယုံကြည်တယ်၊ မင်း php ကို WordPress loop မှာ ခြုံထားရမယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ WordPress သည် စာမျက်နှာတစ်ခုတည်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ခွဲခြား၍မရပါ။ ဘလော့ပို့စ်မှာ ကုဒ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်မယ်။
ဧပြီ 21, 2009 မှာ 3: 16 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ အစမ်းကြည့်မှတ်ချက်တွင် ထည့်ရန်...
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာမှာ Loop အတွင်းသို့ ခေါ်ဝေါ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သည် GATC ကို အောက်ခြေ သို့မဟုတ် ခေါင်းစီးတွင် ကွက်ကွက်တစ်ခုပါရှိသော နမူနာဖိုင်တိုင်းတွင် မဟုတ်ဘဲ GATC ကို အောက်ခြေတွင် ထည့်ထားသည်။ အတွေးများ?
ဧပြီ 21, 2009 မှာ 11: 56 pm တွင်
Matt – မင်းနဲ့ငါ တုံ့ပြန်မှုမှာ တစ်ချိန်တည်း ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ငါထင်တယ်၊ အဲဒါက ကွင်းဆက်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ကုဒ်ကို ပြုပြင်ပြီးပါပြီ၊ ကွင်းဆက်သည် ကိုယ်ထည်အပြင်ဘက်နှင့် အောက်ခြေအောက်ခြေတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဦးမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ပုံမှန်အဝိုင်းအတွင်း ကိန်းရှင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီးနောက် အောက်ခြေမှတ်စုမှ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။
မှတ်ချက်ပေးသူအချို့ကို စမ်းသပ်နေပါသည်- ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် စာမျက်နှာတစ်ခု နှေးကွေးသွားတာကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဧပြီ 22, 2009 မှာ 3: 06 AM
ဒီတစ်ခါတော့ ကုဒ်အသစ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..
မေလ 13, 2009 မှာ 2: 23 AM
မင်းရဲ့ ကုဒ်အသစ်ကို စောင့်နေတုန်း...။ ဒေါက်။ ပင်မစာမျက်နှာများနှင့် ပို့စ်တစ်ခုတည်းစာမျက်နှာနှစ်ခုလုံးအတွက် IF Else tag ကို သင်ထည့်သွင်းသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေမယ့် အဆင်မပြေဘူး...
မေလ 23, 2009 မှာ 11: 24 AM
TGP - တကယ်ကောင်းတဲ့ Post ပါ။
ဇန်နဝါရီ 16, 2010 မှာ 12: 39 AM
ဒီကုဒ်ကို joomla မှာ စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။
stat ၏2ရက်အကြာတွင်… ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ stat တွင် /autor/someauthor ကိုသာမြင်ရသည်။ စာမျက်နှာအစစ်ကို မမြင်တော့ဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2010 ခုနှစ် ညနေ3နာရီ 21 မိနစ်
ဒီတော့ ဒီမှာ စီရင်ချက်က ဘာလဲ။ ဤကုဒ်ကို ကျွန်ုပ် အလွန်စိတ်ဝင်စားသော်လည်း အမှားများအတွက် နေရာမရှိပါ။ Douglas ဆိုတဲ့ စကားက ဘာလဲ။ မင်းရဲ့နောက်ဆုံးပို့စ်က အောင်မြင်/မ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စကားများများပြောဖြစ်တာ မတွေ့ဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2010 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 01 မိနစ်
စီရင်ချက်မှာ အဖြေ၏ 50% ဖြစ်သည် Ross။ Loop တွင် စာရေးဆရာကို သင် သတ်မှတ်ရပါမည်... သင်လုပ်ပါက စာရေးသူ အချက်အလက်ကို Google သို့ မှန်ကန်စွာ ပေးပို့ပါမည်။ သို့သော်၊ Google သည် ၎င်း၏ဒေတာဖမ်းယူမှုကို ပြောင်းလဲပြီး ယခု variable တစ်ခုထက်ပို၍ ခွင့်ပြုပေးသည်... ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ဤနည်းလမ်းကို လုံးဝစွန့်လွှတ်လိုက်ပါမည်။ နောက်ဆက်တွဲရေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
4:2010 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 04 တွင်
GA ကို အသုံးပြု၍ WordPress ရှိ စာရေးဆရာ-သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ခြေရာခံရန် အဖြေတစ်ခုကိုလည်း ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စာရေးသူအများအပြား၏ဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သောကြောင့် ဤကုဒ်၏မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းကို ကျွန်ုပ်တွေ့လိုပါသည်။ သင်နောက်ဆက်တွဲရေးနိုင်ပါသလား။ အဲဒါကို ရေးပြီး ကျားကန်ပေးမယ်။ 🙂 ပုံမှန်အတိုင်း ထူးထူးခြားခြား သိမြင်နားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
26:2010 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 41 တွင်
Doug မှ အမြန်ဖြေကြားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မင်းခဏလေးမှာ အပ်ဒိတ်ကိုမြင်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော ပို့စ်တစ်ခုနှင့် ကောင်းသောနောက်လိုက်မှုကို ပျော်ရွှင်ပါစေ။